download ny Mampiaraka toerana maimaim-poana
«Ny firaisana ara-nofo Niaraka»noforonina ho an’ireo izay mitady ny marina ny fifandraisana sy vonona ny hanakatona maso ny fombafomba.
Lasa azo atao noho ny fanaraha-maso hentitra ny ankizivavy, sy ny»club rafitra»ho mafy orina kokoa ny firaisana ara-nofo (ny lehilahy ho amin’ny asa fanompoana saran’ny)
Io politika io fanapahan-jiro eny mpankafy ‘hiresaka’ ary mamela anao mba hisarihana ihany no loharanon ireo mitady ny tena Mampiaraka sy ny Mampiaraka.
Ao amin’ny»FIRAISANA ara-nofo NIARAKA»tsy misy miafina na tsy maintsy famandrihana. Mampiasa ny»FIRAISANA ara-nofo NIARAKA»ihany rehefa mila izany.
«Ny FIRAISANA ara-nofo NIARAKA»avy amin’ny asa fanompoana»Mialoha ny tetikasa»dia efa voaporofo ny Fiarahana tena mahafinaritra ny vehivavy mitady mahomby ny olona izay te-handany vola amin’ny mendrika ny fanomezam-pahasoavana.
Hafa ihany koa ny ankizivavy antsoina hoe ny»foana ny vehivavy».
Mila manohana ara-bola, ny namana, ny mpiara-mitory na ny mpiara-mitory amin’ny takariva, te ho any amin’ny daty, mitady fitiavana
Mitady akaiky fihaonana toy ny mpivady, Mampiaraka, Mampiaraka (firaisana ara-nofo Niaraka) Mampiaraka an-tserasera, tia lalao, virtoaly ny firaisana ara-nofo, ny lehibe na ny havesatry ny fifandraisana amin’ny mety ho tombony amin’ny mahaliana ny olona. Ny toetry ny fifandraisana dia tapa-kevitra ihany ny anao.
Ianao no mpiaro ny maimaim-poana ny fitiavana, ny vadiny na ny vadiny reraka, te-hanana ny raharaha eo amin’ny lafiny iray, mino aho fa ny Mpanjaka na ny ankizivavy mbola any ho any avy any, nefa roulette apps manome fahafinaretana geo, tsy ho anao. Avy eo dia misintona ny»FIRAISANA ara-nofo NIARAKA».
Mandefa hafatra, sary, dia mizara ny faniriany sy ny fampiharana azy eo amin’ny fiainana, ny mahita olon-droa ao an-tanàna.
Fampiharana ny kisary tsy hahatonga ny hafa tsy ilaina ny fanontaniana; miditra ny fampiharana dia voaaro amin’ny alalan’ny fehezan-dalàna-ny tenimiafina
← Afaka ianao daty tsy manan-tsaina, an-tariby? Azy izao Tontolo izao dia Afaka mampiaraka ianareo raha tsy misy manan-tsaina, an-tariby